Mamorona horonan-tsary amin'ny findainao miaraka amin'ny Zoetic, fampiharana hampifanarahana sary | Famoronana an-tserasera
Ampifanaraho amin'ny sary maro ny famoronana horonan-tsary mba hahitana ny fandehan'ny fotoana
Manuel Ramirez | | sary, maro
Zoetic dia fampiharana ho an'ny fitaovana Android miavaka amin'ny fahafahany mampifanaraka sary maromaro ary noho izany dia mamorona horonantsary fandaharam-potoana ahafahantsika mahita ny fomba fitomboan'ny zavamaniry iray, ny fomba fanatanterahana trano iray na ny fiovan'ny iray amin'ireo zanatsika amin'ny tarehy.
Fampiharana maimaim-poana izay azontsika atao mamorona horonan-tsary tena ilaina sy mamorona. Mazava ho azy fa tsy ho mora ny mahazo azy io raha te hahazo tombony betsaka amin'izany. Na dia hatramin'ny fotoana voalohany tamin'ny tetikasa aza dia afaka mahita haingana ny fomba hiatrehana izany isika.
Zoetic dia manandrana maka sary andiana sary ary ampio andiana vatofantsika ho azy ireo izay hampiasan'ny fampiharana ny majika rehetra. Izany hoe hifanaraka amin'ireo teboka ireo mba hamoronana horonantsary farany izay ahitantsika ny fomba nitomboan'ny zavamaniry iray hatramin'ny naha voa azy na ny fahanteran'ny endritsika rehefa nandeha ny fotoana.
Fitaovana mila fotoana kely vao zatra. Ny zava-dehibe dia manandrana manao ireo sary ireo hanana fitoviana mba hahafahan'ireo horonan-tsary ireo natambatra sy noforonina. Raha efa afaka naka ny sary tamin'ny fomba fijery mitovy isika, toy ny mety hitranga rehefa maka sary ny fizotry ny fananganana trano na trano isika, dia hahagaga ny vokany.
Tokony holazaina fa ny kinova Zoetic maimaim-poana dia misy fetra vitsivitsy ary misy dokam-barotra. Ny fetra raha oharina amin'ny kinova Pro, izay mitentina 1,09 euro, dia mifototra amin'ny fetran'ny sary azo ampifanarahana ary ny famahana ny fampidirana sy ny fivoahan'ny sary sy ny horonan-tsary.
Raha tena mahazo aina amin'ny interface-nao ianao ary fantatrao ny fomba hanararaotana an'io, ny kinova Pro dia tsara kokoa noho ny fampiharana tsy manam-paharoa ho an'ny finday. Avelanay ianao ny programa tsara indrindra hanaovana video.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ampifanaraho amin'ny sary maro ny famoronana horonan-tsary mba hahitana ny fandehan'ny fotoana
Hevitra tany am-boalohany momba ny fanamarihana fanomezana Krismasy
Mamorona sary vonganao miaraka amin'i Humaaans nefa tsy manana hevitra momba ny sary